Sei vanhu vachitidaidza kuti takaremara uye takaremara? | Karman® Mawiricheya
Unogona here kutidaidza "zvakasiyana-abled" kana kungoremara? Kuremara kuri inoonekwa sehurukuro inonzwisisika nevakawanda.
Vakaremara-huwandu hwevanhu hunetsekana nekutaura zvisizvo zvisizvo nekusaziva. Uku kunyarara kunotungamira kunzvenga kwe kuva nekukosha hurukuro nezve kuremara. Panofanirwa kuve nehunyanzvi kune izvi.
Mufananidzo na ELEVATE pa Pexels.com
Pakave nekukakavadzana kwakasiyana pamusoro pechokwadi cheiyi mushandirapamwe pakati pemapato akati wandei. Imwe hafu inoona kukosha kwekunyora vanhu sevakaremara uye kuvabvumidza kuve nesimba pamusoro pezvavanogumira.
Pakupedzisira, kwete kutsanangurwa nazvo. Kugadzira iyo mazita "zvakasiyana-abled" ndiko kudzikisira mamiriro ezvematongerwo enyika e kuremara. Iri kuyedza kuvimbisa vanhu vakaremara kuti isu tinokwanisa miviri yakangosiyana.
Mushandirapamwe unoparidza kuti havasi kudzikisira ruzivo rwavo. Ivo vari kunzwira tsitsi navo mukurwa kwavo.
Pfungwa ye kushandisa izwi rekuti "zvakasiyana-abled" rinopa simba rakawanda kune vanhu vakakanganiswa. Iyo nzira yakapfava. Zvirinani nenzira iyi.
Vakaremara vanhu kana vakasiyana-vakaremara vanhu vakaita sevanhu vanokwanisa mune zvekuti ivo vanhu.
Uye ivo vanotakura zvakasiyana zvakafanana sevasina kuremara vanhu.
Nekudaro, vanhu vanotaridzika vakasiyana nekuda kwekureba kwavo, kwakavakwa, ruvara rwemaziso, pamwe nekusiyana kwekuda mavhiripu, chiuno chekunzwa, kana basa.
Uyezve, vakaremara havana nyika yavakamisirwa. Izvo hazvisi kuvafarira.
Uyezve, kunyanya kana isu tichiziva kukanganisa kwacho kungave kwakanyanya kureba.
Ivo vanofanirwa kushandira kuti zvive nyore kuwanika uye kusanganisirwa kuve panzvimbo imwecheteyo sevanhu vakajairika. Kurwa kunogara kurwa nevanhu kuti vanzwisise kunyangwe vachinzwira tsitsi sei.
Mirayiridzo yekuita hurukuro nevanhu kana nezve "vakaremara" kana "vakasiyana-siyana" vanhu
Tinokurudzira vaverengi vedu kuti vadzidzise pachavo pazvinhu izvi. Shandisa nhaurirano yakakodzera ne "vakaremara vanhu." Isu takanyora mamwe mazano anozobatsira kuve nemhedzisiro iri nani.
1. Teerera kune vanhu vekukurukurirana. Ivo vanofanirwa kuve vari pamusoro pezvekuti ivo vanoda kuzvidaidza sei.
2. Vakaremara havafungi kuremara sechikamu chemunhu wavo uye hazviwanzo kuratidza kunzi "munhu ane kuremara. "
3. Dzivisa manzwiro asina kufanira emanzwiro. Kuva ne kuremara hazviite kuti mumwe munhu ave nyajambwa, mutoro, kana gamba.
4. Dzivisa izwi rokuti 'kuremara.' Izwi rekuti kuremara rinoonekwa serine chirevo chisina kunaka.
5. Dzivisa kufonera a remara munhu 'murwere' Vanhu vakaremara.
6. Usareve zvemunhu kuremara sechikamu chekuzivikanwa kwavo.
Bvumira vanhu sarudzo yekunyora kana kusazvinyorera ivo pachavo.
Isu tinofanirwa kukwikwidza kutsigira mutauro "wevanhu-wekutanga", uyo unosimbisa kuisa munhu pakutanga uye iye kuremara kechipiri.
Mushure memakore ekuona "kwazvakarerekera," makiriniki mazwi senge "akaremara mupfungwa" kana "akatambudzika," mutauro-wekutanga mutauro yaive nzira yekudzosa hunhu uye hunhu, sekureva kwaLydia XZ Brown ndeye kuremara mutungamiriri wenzvimbo yekutonga uye gweta.
Nhasi, varatidziri vane ruzha rwemutauro-wekutanga mutauro vanhu vasina kuremara. Vabereki vevana vakaremara, vadzidzisi, uye varapi vanogona kunge vakadzidziswa "kurapa murwere, kwete chirwere."
Izvo 's yakakosha kuziva kuti iyo nharaunda yakaremara haisi monolith. Munhu anogona kuve nesarudzo inosiyana nevamwe vanhu munharaunda mavo. Kana iwe uri kushamisika kuti ndeipi nzira yakanakisa yekutsvaga shamwari, vashandi pamwe navo, kana vamwe, zvese zvinotora iko kuda kutevera kwavo kutungamira.
Kutanga, tora zvinyorwa zvako nezvekuti vanhu vanozvinongedzera sei pachavo muchirongwa cheboka.
Pamusoro pezvo, kana uchikahadzika, daidza mumwe munhu nemazita avo - kana kungobvunza kuti vangazoda kuitirwa sei zvine hungwaru, zvisina kunetsa nzira.
Mashoko ane simba rakawanda.
Uyezve, zvinyorwa zvatinoisa pavanhu zvine zvakatowanda.
Isu matauriro atinoita nezve vanhu anovhara nzira pamaonero avanozviona ivo pachavo? Iyo ine inogara inokanganisa maitiro avanoona pasi. Kunyora mumwe munhu se "akabviswa" kunoita kuti vatende sekunge vasina kukodzera mabasa. "Vakasiyana-siyana" vanovatendera kuti vazive kuti nyika inoshanda zvakasiyana kwavari. Uye vane hunyanzvi hwakasiyana hunoda nguva. Pamwe kunyange simba rekuda kukura.
Mashoko ane simba rakawanda. Mavara atinoisa pavanhu anoita mutsauko. Matauriro atinoita nezve vanhu anovhara nzira yekuti vanozviona sei uye zvine chekuita nekusingaperi pamaonero avanoona nyika. Kunyora mumwe munhu se "akabviswa" kunoita kuti vatende sekunge vasina kukodzera mabasa. "Akasiyana-siyana" anovabvumira kuti vazive kuti nyika inoshanda zvakasiyana kwavari uye kuti vane zvakasarudzika kugona kunoda nguva uye simba rekubudirira.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.